Xaflad ku aadan ka gudbida Gudniinka Gabdhaha oo ka dhacday Qardho – SBC
Xaflad ku aadan ka gudbida Gudniinka Gabdhaha oo ka dhacday Qardho
Magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar waxaa ka dhacday Xaflad aad u balaarneeyd oo ay ka soo qeyb galeen Dhinacyada kala duwan ee Bulshada Maamulka Culimo iyo weliba bahda caafimaadka.
Xafladaasi ayaa aheyd mid ku aadan Xuska maalinta Caalamiga ah ee ka gudbida Dacadiyada Gudniinka Gabdhaha oo ku began 6da bisha 3aad taasi oo laga xuso geyga Soomaaliya iyo caalamkaba.
Waxaa halkaasi hadalo Khiimo badan oo ku aadan ka gudbida Arintani ka jeediyay masuuliyiintii halkaasi ka soo qeyb galay, sida Maamulka gobolka Karkaar, kan degmada iyo weliba Hay’adaha ka qeyb qaadanaya oo ay ka mid tahay wasaarada Caafimaadka Puntland.
Duqa degmada Qardho Maxamed Siciid Ciise hogaamo oo ka mid ahaa masuuliyiinti halkaasi kahadlay ayaa sheegay in dacadiyada loo geysto haweenka ay yihin kuwo aad u xun loona baahanyahay in sida ugu macquulsan loogaga hortago, waxaanu taabtay dhibaatooyinka ay la kulmi karto gabadha yarta ah ee loo geysto Gudniinka aan sharciga aheyn.
Waxa iyana hadlo khiimo badan ka soo kala jeediyay masuuliyiin ka kala socday Hay’ada Savethe children iyo Wasaarada Caafimaadka oo iyagu iska kaashaday qaban qaabada Xafladaan waxayna taabteen arimaha ugu muhiimsan ee ay tahay in laga hortago oo ah gudniinka iyo Tacadiga loogeysto Dumarka.
Masuuliyiin ka socday Wasaarada Haweenka ayaa ka mid ahaa masuuliyiintii halkasi ka hadashay waxaana Sahro Siciid Jaqanaf oo ah Isuduwaha wasaarada Haweenka ee gobolkaas ay sheegtay in ka wasaarad ahaan aysan raali ka aheyn gudniinka iyo tacadiyada loogeysanayo Haweenka yaryar ayna tahay xadgudub loogeysanayo.
Ugu dambeyntii Xafladan ayaa ku soo gaba gabowday si heersare ah, waxaan la isku afgartay dhamaan masuuliyiintii halkaasi ka soo qeyb galay sidiii loogaga hortagilahaa dhacdooyinka foosha xun ee loogeysanayo gabdhaha.